China SD02007 အရည်အသွေးမြင့် 20x20x7mm axail Fan 12V 5V 2007 Mini Cooling Fan 12v dc brushless cooling အိတ်ဆောင်လေဝင်လေထွက်ပန်ကာစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | မြန်မြန်
SD02007 အရည်အသွေးမြင့် 20x20x7mm axail ပန်ကာ 12V 5V 2007 Mini Cooling Fan 12v dc brushless cooling အိတ်ဆောင်လေဝင်လေထွက်ပန်ကာ
အလေးချိန် ၅ ဂရမ်
★စစ်ဆင်ရေးအပူချိန်: -20 ℃ ~ 85 ℃ (သာမန်စိုထိုင်းဆ)
★ StorageTemperature: -30 ℃ ~ 85 ℃ (သာမန်စိုထိုင်းဆ)
ဘဝအချိန် - ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် ၂၅ ℃နှင့်စိုထိုင်းဆ ၆၅% တွင်
လက်ဝက်ဝံ: နာရီ 30,0000
ရိုင်ဖယ်သေနတ်: 40,0000 နာရီ
ဘောလုံးဝက်ဝံ: နာရီ 50,0000
အရည် Dynamic ဝက်ဝံ: နာရီ 100,000
★ polarity ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဆက်သွယ်မှုသည်မည်သည့်ပျက်စီးမှုကိုမျှဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ
တစ်လလျှင် 10000000 အပိုင်းအစ / အပိုင်းပိုင်း
1. တင်ပို့: FOB Shenzhen ။
2. ငွေပေးချေမှု: T / T, Western Union သို့မဟုတ် Paypal ။
3. ခဲအချိန်: အမိန့်အရေအတွက်ဘာသာရပ် 15-30 ရက်။
4. ခဲအချိန်နမူနာ: 3-7 ရက်။
ပွတ်တိုက်အားပွတ်တိုက်ပုံစံ၊ လျှောပွတ်မှုပွတ်အင်္ကျီလက်ဝက်ဝံကိုသုံးပါ Ball bearings နှစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ပွတ်တိုက်အားကပိုမြင့်သည် ချောဆီနှင့် drag လျှော့ချလက်၌အသုံးပြုကြသည်။
ကောင်းကျိုးများ - ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ double ball bearing ၏အားသာချက်မှာ၎င်း၏သက်တမ်းရှည်သည်။ ရေနံတံဆိပျ၏အကြောင်းရင်း, ချောဆီကိုတဖြည်းဖြည်းအငွေ့ပျံ, ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်ပရိတ်သတ်များအတွက်သင့်တော်သည်မှာအားနည်းချက်ဖြစ်သည် ဆီတံဆိပ်ကိုဖွင့်ပြီး Fengze bearing capacity ကိုဖြည့်ရန်လိုသည်။ ဆူညံသံအနည်းငယ် ပို၍ ကျယ်လောင်သည် ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဘ ၀ သည်ဘောလုံးအ ၀ တ်ထက် ပို၍ နည်းသည်။
ငါတို့ ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်ကြသည် ကျယ်ပြန့် သက်ဆိုင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပစ္စည်းကိရိယာ၊ ယာဉ်သုံးစနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလှကုန်ပစ္စည်း၊ အိမ်တွင်းပြဇာတ်ရုံသုံးပစ္စည်း၊ LED အလင်းရောင်သုံးစက်ကိရိယာများ၊ UPS ပါဝါစနစ်၊ အသိဉာဏ်ရှိသော bidet၊ ရေခဲသေတ္တာလုပ်ငန်းနှင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်၊ အိုင်တီနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ 3D Printer စသည်တို့။
★ FEDEX, DHL, TOLL, ARAMEX, TNT, POST နှင့် EMS ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့နိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးသည်အလွန်လုံခြုံပြီးခိုင်ခံ့သည်။ သင့်တွင်အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားပါ။
Q1: သင်ကစက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။
A1: ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့က professional cooling fan စက်ရုံ။
Q2: DC Fan နှင့် AC ပန်ကာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
A2: DC ပန်ကာသည် DC ဗို့အားဖြင့်စွမ်းအားဖြစ်ပြီး 5V, 12V, 24V, 48V, 60V နှင့် 72V ဖြစ်သည်။
AC ပန်ကာသည် AC ဗို့အားဖြင့်စွမ်းအားဖြစ်ပြီး 110V, 220V နှင့် 380V ဖြစ်သည်။
Q3: DC ပန်ကာကိုမည်သို့ရွေးရမည်နည်း။
အရွယ်အစား 12025 120x120x25mm
bearing အမျိုးအစား နှစ်ဆဘောလုံးကိုဆောင်သော
connector ကို4pin ကို molex 2564
ဝါယာကြိုး 300mm အရှည်နှင့်အတူ4ဝါယာကြိုး
function ကို FG / RD / PWM / Soft Start ……
*** သင်သည်အခြားမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်အခြားလိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
*** အထူးအအေးခံစက်များအတွက် - စိုထိုင်းသော၊ ရေစိုခံ၊ တာဘိုအားသွင်းစက်၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ ပြန်လည်ပြောင်းနိုင်သော၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ PWM အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု၊ ကျေးဇူးပြုပြီးလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ပါ။
Ampere ၏ညာဘက်စည်းမျဉ်းအရ အကယ်၍ conductor သည် current ကိုဖြတ်သန်းသွားပါက Zhou Huang သည်သံလိုက်စက်ကွင်းကိုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုအခြားသံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုတွင်ထားပါကဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။
အရာဝတ္ထုများကိုရွေ့လျားစေခြင်း၊ DC ပန်ကာ၏ပန်ကာဓါးအတွင်း၌သံလိုက်ဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ရော်ဘာသံလိုက်တစ်ခုတပ်ထားသည်။ ဆီလီကွန်သံမဏိစာရွက်များနှင့်ဝိုင်းရံထားသည် ရိုးတံအစိတ်အပိုင်းကိုကွိုင်နှစ်ခုဖြင့်အနာကျစေသည်။ ထို့ပြင်အကွေ့အကောက်များသောရိုးတံကိုပြုလုပ်သောအုပ်စုပတ်လမ်းကိုထိန်းချုပ်ရန် Hall sensor element ကို synchronous detection device အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ကွိုင်နှစ်ခုအစုံအလှည့်၌အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဆီလီကွန်သံမဏိပြားများသည်မတူညီသောသံလိုက်တိုင်များထုတ်လုပ်သည်။ ဒီသံလိုက်တိုင်နှင့်ရော်ဘာသံလိုက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်စွမ်းအားကိုထုတ်လုပ်သည်။
ပွတ်တိုက်မှုနှင့်အတူပန်ကာဓါးသွားသဘာဝကျကျလှည့်။ Hall sensor ဒြပ်စင်သည်ထပ်တူပြုခြင်းအချက်ပြမှုပေးသောကြောင့်ပန်ကာဓါးသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ SD02010 20mm ဝါသနာရှင် 20x20x10mm dc ပန်ကာများရောင်းအားအကောင်းဆုံး 2010 မူလစာမျက်နှာစိုထိုင်းဆပန်ကာ 20x20x10mm အရွယ်အစားသေးငယ်
နောက်တစ်ခု: PG-12-2 120mm ပလပ်စတစ်ပန်ကာဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်စက်ပန်ကာအအေး ၄၀,၆၀,၈၀,၁၀၁၁၀၁၂၁၊
Dc Mini Axial Fan ပန်ကာများကိုအအေးခံ
DC Axial ဝါသနာရှင်
DC Cooler Blower ပန်ကာများ
dc Cooling ဝါသနာရှင်
သေးငယ်သော Dc Axial Brushless Frameless Fan
DC FAN SD12038-2 ဘောလုံးထည့်ထားသော 12038 S7 S9 antmi ...
12cm Ac Axial ဝါသနာရှင်, 172mm Ac Axial ဝါသနာရှင်, ပလတ်စတစ်ပန်ကာကိုယ်ရံတော်, သတ္တုကင်ပန်ကာ 80mm ကိုယ်ရံတော်, သတ္တုပန်ကာအစောင့်, Hvac ဝါသနာရှင် Puller,